Okokuqala, vakashela isitolo sethu e Joopzy
Yilokho kuphela! Kulula kakhulu.
Sithumela ama-oda phesheya ngesevisi yeposi.
Ngemuva kokuqeda ukucubungula i-oda lakho, sizolithumela enkampanini yokuthumela izinto, futhi bazoyiphatha ngokuphelele. Ngemuva kokufika ezweni lakini, izosingathwa insizakalo yeposi yezwe lakho. Ngakho-ke ngicela uxhumane ngomusa neposi lakho lasendaweni lapho lifika ezweni lakho.
Iziphi izindlela zokukhokha ezamukelwa eJoopzy?
Samukela amakhadi we-Paypal, ama-debit / ama-credit, nama-cryptocurrensets.
Sithumela emhlabeni wonke, futhi isikhathi Sethu sokuthumela sivame ukuba ngaphakathi 7-10 izinsuku zebhizinisi eziya e-USA, futhi 12-15 izinsuku zebhizinisi kwamanye amazwe. Noma kunjalo, kungathatha kuze 20 kufika izinsuku zebhizinisi, kuya ngendawo okuyo nokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukudlula emasikweni.
Uyini umgomo wakho wokubuyisa?
Ikheli le-imeyili likaJoopzy?
Uma unemibuzo, ubhekene ne-oda, njll., Usidubulele umyalezo osheshayo!